Service Marketing Executive | P.A.G Company Limited ﻿
4.10.2019, Full time , Distribution / Logistic
Company: P.A.G Company Limited
P.A.G Company Limited. .
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ၀တ်ဆင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
•	Customer Service ကောင်းမွန်၍ Customer အသစ်များကို တတ်ကြွစွာ ရှာဖွေနိုင်ရမည်။
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
Work location No.182-194 ©,Ground Floor, Hnin Si Condo ,Botahtaung Pagoda Road, Pazuntaung Township
•	Windows (or) Web Development အား ကျွမ်းကျင်စွာရေးတတ်ရမည်။ For D.I.S Technology Co., Ltd
P.A.G Company Limited.
•	Have good communication skills and interpersonal skills. •	Able to travel when required and work under Pressure. For D.I.S Technology Co., Ltd.
•	Ability to develop and maintain positive relationships with all user. For D.I.S Technology Co., Ltd
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး တက်ကြွစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်၍သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာဝတ်ဆင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Customer Service ကောင်းမွန်၍Customer အသစ်များကို တက်ကြွစွာရှာဖွေနိုင်ရမည်။ •	သင်ယူလိုစ်ိတ်ရှိပြီးအဖွဲ့စည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွ ...
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီးတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ပြီးလက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
Service Marketing Executive Marketing & PR Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon P.A.G Company Limited Marketing & PR jobs Marketing & PR jobs Distribution/Logistic Jobs in Myanmar, jobs in Yangon